केहि दिन अघि प्रहरी इन्काउन्टर मारिएका गुन्डा नाइके मनोज पुन र सोमबहादुर आलेको घट्नाले लियो अब यस्तो मोड ! – Etajakhabar
काठमाडौं । केहि दिन अघि प्रहरी इन्काउन्टर मारिएका गुन्डा नाइके मनोज पुन र सोमबहादुर आलेको विषयमा लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान शुरु गरेको छ। घटनाको विषयमा बुटवलमा रहेको मानवअधिकारको कार्यालयलाई सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको हो ।
नेपाल प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका भनिएका मनोज पुन प्रहरीसंगको मुठभेडमा बुधवार बिहान सबेरै पश्चिम नेपालस्थित उनकै गाउँ देवदहमा मारिएका थिए ।
आयोगले अनुसन्धान शुरु गर्ने भएपछि मृतकका आफन्तले बुधवार शव बुझेर अन्त्येष्टि गरिसकेका छन्। यसअघि उनीहरुले शव बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार विभिन्न व्यक्तिको हत्या लगायत अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न पुन करिब दुई वर्ष देखि फरार थिए।
प्रहरीले प्रत्याक्रमणमा पुन मारिएको बताए पनि करिब एक साता यता विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा उनीबारे विभिन्न सूचनाहरु फैलिएको थियो । एक वर्ष अगाडी नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालका रुपन्देही अध्यक्ष दुर्गा तिवारी र त्यसपछि गएको पुस मै अर्का एमाले कार्यकर्ता बलु पौडेलको हत्या अनि अन्य आपराधिक कृयाकलापमा मनोज पुनको संलग्नता रहेको बताइएको थियो।
भारतमा बसी नेपालमा आपराधिक कृयाकलाप संचालन गर्दै आएका भनिएका मनोज पुन सहितको टोली चार दिन अघि नेपाल प्रवेश गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले खोज्दै जाँदा उनकै गाउँ देवदहमा भेटिएका थिए ।
“राज्य त अभिभावक हो। राज्यले कसैलाई मार्न हुन्न र उसले कुनै अपराधीलाई छूट दिन पनि हुन्न। अपराधी र आरोपीहरुलाई जहाँबाट भए पनि खोजेर ल्याई कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ,” पाण्डेले भने।
तर एसपी श्याम ज्ञवाली भने यस्ता आरोपको खण्डन गर्छन्। उनी भन्छन्, “गोवामा पक्रियो भन्ने चर्चा छ। त्यो ठाउँ त टाढै छ। त्यहाँ पक्रिएको कुरा कसले जानकारी पायो? किनभने तथ्य त अर्कै छ। हामीले त जहाँ भेट्यौं त्यहीं भन्न पर्‍यो।”
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ११, २०७४ समय: १९:०१:०४